Muran wali ka taagan dhismaha Wadada burbursan ee Lafagorey (dhegayso) – Radio Daljir
Muran wali ka taagan dhismaha Wadada burbursan ee Lafagorey (dhegayso)
Maajo 20, 2020 1:56 g 0
Xilli muddo laga joogo waqtigii roobabku gooyeen wadooyinka Gobolka Gardfuu, dhaqaale badana loo aruuriyey gobolkaas si loo dhiso wadooyinkaas ayaa waxaa aan ilaa hada shaqa muuqata laga qaban meelihii roobabku gooyeen.
Qalab ka yimid Magaaladda Gaalkacyo oo uu hogamanayo Samafale Maxamed Yusuf Jamac Tigey ayaa gaarrey Gobolka gaar ahaan Magaalada Baargaal halkaas markii qlaabku gaaray ayaa waxaa ka hor yimid dadka degaanka,kuwaas oo laba garab u kala qaybsamay.
Nabadoon Maxamuud Cumar duufaan wuxuu ka mdi yahay waxgaradka Gobolka Gardafuu wxuuu sheegay inay ka xun yihiin qalabkaas in is hortaag lagu sameeyo,wuxuna ka hadlay Muranka ka dhashay dhismaha wadadaas Muhiim ah.
Wariye Cabdixakiin Xuseen Xasan ayuu u waramay.
Mid kamid ah Beelaha daga Galgaduud oo Caabudwaaq shir ugu soo xirmay (Daawo)
Haweenka PUNTLAND iyo guul ka gaarista Arrimaha Siyaasadda Dalka (Taxanaha 7aad | dhegayso)